Global Voices teny Malagasy » Mpiasa, Vehivavy, Ahmadinejad & Ayatollahs · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Marsa 2019 4:58 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanatanjahantena, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Noresahan'ireo bilaogy iraniàna ny momba ny fihetsiketsehana tamin'ny 1 May tao Tehran sy ny fanapahankevitr'i Ahamdinejad  hamela ny vehivavy ho afaka hiditra kianja fanaovana fanatanjahantena mba hijery lalao baolina kitra. Voaresaka tany anatin'ireo bilaogy iraniàna sy manerana izao tontolo izao ilay fanapahankevitry ny filoha, toy ny tao amin'ny fandaharana “Have Your Say” an'ny BBC. 
Jomhour milaza, araka ny ILNA  (Iranian Labour News Agency), fa anjatony maro ireo iraniàna mpiasa no tonga avy any amin'ny lafivalon'ny firenena nankao Teheran mba hanao fihetsiketsehana nanoloana ny masoivoho amerikàna. Lazain'ilay bilaogera fa tsy takany ny antony anaovan-dry zareo ireo fihetsiketsehana manoloana ny masoivoho amerikàna fa tsy eo anoloan'ny Ministeran'ny Asa. Soratan'i Jomhour ao amin'ny bilaoginy ny sasantsasany tamin'ny teny faneva nentin'ireo mpiasa, toy ny hoe Henatra ho anareo ao amin'ny Ministeran'ny Asa, Tapitra ny taona fa izahay tsy mbola mandray karama ihany.
Pouyashome no miresaka ny kabarin'i Ahmadinejad tamin'ny 1 May ary milaza fa araka ny ISNA (persiàna)  nilaza tamin'ireo mpiasa ny filoha Iraniàna fa zavatra tsara ny fananganana sendikà. Ampian'ilay bilaogera fa ireo mpamily fiara fitaterambahoaka dia efa nanao io zavatra tsara io ary haintsika izay nanjo azy ireo, voadaroka ireo mpiasa no sady nosamborina .
Manana fijery iray hafa momba ireo Ayatollahs Lehibe i Sibestan. Lazainy fa ny lanjan'ny didy avoakan'ireo Ayatollahs Lehibe dia voafetra ho an'ireo mpanaraka azy ihany. Ampiany hoe ny filoha iraniàna dia nanomboka nandray anaty kajikajy ny fomba fihevitry ny vahoaka ary indrindra fa ny an'ireo vehivavy . (Persiàna)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/05/135614/
 tao amin'ny fandaharana “Have Your Say” an'ny BBC.: http://www.bbc.co.uk/blogs/worldhaveyoursay/2006/04/whats_the_talk_where_you_are.html
 Azarmehr : http://azarmehr.blogspot.com/2006/05/may-day-rallies-attacked-by-islamic.html
 ISNA (persiàna): http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-706795
 Ayatollhas Lehibe : http://en.wikipedia.org/wiki/Ayatollah
 Ampiany hoe ny filoha iraniàna dia nanomboka nandray anaty kajikajy ny fomba fihevitry ny vahoaka ary indrindra fa ny an'ireo vehivavy: http://sibestaan.malakut.org/archives/2006/04/post_506.shtml